Soomaaliya waxaa isku haysta laba kooxood oo ay kala-matalayaan kuwa aan dowlad-nibama rabin, hadafkooduna-yahay sidii looga hortagi-lahaa khatarta ay dowlad-nimadu u leedahay danahooda shakhsiga ah. Kooxda kale waa koox ay raba in dowlad la helo, waxaase ka xun jidkii loo mari-lahaa, waliba dhibaato ka sii xun dowlad-la’aanta ayey soo wadaan, oo ah in dalka shisheeye loo dhiibo.
Xamar ceebta koowaad ee saraan waxay noqotay jidkii dowlad-nimada iney caqabad ku noqdeen, markaan Xamar leeyahay waxaa ula jeedaa hogaanka Siyaasadeed ee kala-qaybsan ee hubka ku haysta Muqdisho.
Dhacdooniyka aniga shakhsiyan iga soo marta Isbaaro ee aan xusuusto masoo koobi karo, waxaanse waligay ilaawaynin qisadan. 5.tii galab-nimo ayaan gaari tareelle ah ka soo raacay jidkii dheeraa ee warshadaha, wuxuuna usoo socday Baydhabo, 48.saacadood kadib ayaan Afgooye imid. Gaaarigii aan saarnaa oo ahaa tareelle, waxaan arkayey inta ay le’egtahay dherarka gaariga inay ku dhex jireen ilaa 5.Isbaaro, oo ay khasab nagu ahayd inaan mid walba gooni ula heshiinno.
Qisoo-yinkii hore markaan meel iska dhigno, oo aan usoo laabanno hawlaha ay hadda wadaan labada gole ee mudada dheer ku sugan Muqdisho. Tan iyo maalintii ay xamar tageen waxaa lawadaa hadal ah, Isbaaro ayaan qaadaynaa. Jidkaas ayaan Isbaaradii ka qaadanay. Haddan nahay Qabiilkaas waan qaadnay Isbaaradeennii.
Dad badan ayaa moodayey Isbaaradu iney tahay falal ay si anshax-xumo ahi ugu kacaan wiilal yar yar oo aanan haysin fursad shaqo, ama aysan jirin maamul ay ka baqaan. Laakiin dhawaan waxaa la ogaaday in Isaabrooyinka yaalla xamar ay u yaalaan dagaal-ooga-yaashii hore, Wasiiradii danbe. Waxaa la hubsaday in 85% Isbaarooyinka yaalla iney dhigteen Wasiirada dowladda ku jira. Sidee ayuu noqonaya dareen-kaadu markaad ogaato in Wasiir hebel ay meel heblo utaallo Isbaaro, uuna isagu yahay kan dhacaya dadka, oo ka qaadanaya canshuur aan sharci ahayn.
Dadbaa ku dooda in 15.Sano oo fawdo ah aanan maalmo ama bilo lagu xalin karin, taasi waxay run u ekeenaysaa marka arintu tahay in bulshada waxa laga qabanayo, laakiin sidee ayey dhab u noqon-kartaa marka ay Isbaaradu u taallo Wasiirkii la rabay inuu isaguba ka hortago arintaas, misa waxaan leenahay Wasiirka laftiisa ayaa in dhaqankaas laga tir-tiro maskaxdiisa wakhti dheer u baahan.
Nairobi kolkii dawlada lagu dhisay oo ay hogaamiye-yaasha Muqdisho Wasiirro noqdeen ayuu mid kamid dadka weydiiyey. Waa imisa mishaarka lasiinayo Wasiirka anigoo kale ah? Waxaa la yiri 2500. Doolar ugu badnaan, maadama dalku uusan dhaqaale lahayn. Kolkaasuu la hadlay maamulihiisii dhaqaalaha, wuxuu su’aalay imisa ayaa naga soo gasha Isbaarada? Wuxuu yiri cel-celis maalintii 6500.
Mid kalana tolkiis ayaa kula taliyey inuu Siyaasada isaga baxo oo ay lacag u uruuriyaan si’uu ganacsade u noqdo. Wuxuu ugu jawaabay waligiin hal maalin gudaheed ma’idin soo gashaa wax kabadan boqol kun oo Doolaar? Isbaarada taalla jidadka kaliya waxaa maalintii ka soo xaroota 55.kun oo doolar, waana qiimeyn sax ah oo si cilmi loo sameeyey. Runta ka jirta Xamar waa taas.
Intii bilood ee ay labada gole joogeen Muqdisho waxaa sheekadii xamar ka jirtay oo dhan naloogu soo koobay Isbaarada halaqaado. Noloshii kale ee dhimanayd wali lagamaba doodin. Sidii nadaam loogu samayn-lahaa Xamar wali lagama doodin. Horumar-kale oo dhanna warkiisaba iskadaa.
Isbaarada lafteeda qaybaha ay u kala baxdo waxaa mar ka faallooday C/Nuur Faarax oo bishii hore Maqaal wacan ka qoray. Waxaanse wali laga maqal labada gole ee Xamar jooga iyagoo Isbaarada si dhamays-tiran uga hadlaya. Waxay ka hadalaan oo kaliya Isbaarada Barriga taala ee u taalla wiilal yar yar oo hankoodu yahay sidii ay maalintaas shilin ay ku qayilaan u heli-lahaayeen.
WFP oo 48 Saacadood u Qabatay in lagu Siidaayo Markabka Lagu Afduubay Somalia
Waxana ay WFP ku eedaysay DFKMG wax ka qabasho la'aanta siideynta markabka mucaawinada u sidey dadkii ka badbaadey... Guji... July 14, 2005
Badda waxaa taala Isbaaro. Cirka waxaa yaalla Isbaaro. Labadaasba waxay u yaalaan qolyo hada sheeganaya iney dowladda ku jiraan, ama kamid ah liiska wax-garadka bulshada Xamar ku nool.
Dekedii weynd ee Muqdisho waa xirantahay, waxaa naloogu sheekeeyey iney muran Siyaasadeed u xiran-tahay. Hadday taasi dhab tahay maxay Dekedaha kale ushaqay-nayaan? Oo waliba kooxa isku haya xamar oo dhan aysan uga hor imanaynin. Waxaase ka sii daran labada gole ee Muqdisho joogana aysan u socon iney ka hadlaan. Kaliya waxaa la rabaa in hadalka lagu soo koobo wiilka yarka ah ee aan hadafka weyn lahayn, dhaqaalaha badanna uusan soo galin.
Garoonkii weynaa ee Caasimadda waa xiran-yahay, isna khilaaf Siyaasadeed ayuu u xaniban-yahay baa nalagu yiri. Hadana waxaad arkaysaa garoonno kale oo shaqaynaya oo ay noloshii qaarkeed ka socoto. Aaway kolka khilaafka jira ee dekedda weynna diidaya, kuwa yaryarna fasaxaya. Mise xaalku waxaa weeye. Waxaan heshiis ku nahay ka hortagga maslaxada guud, iyo dhiiri-galinta danta shakhsiga ah.
Dulaan ba’an ayaa lagu qaaday Isbaarada jidadka taalla. Wiil ay Isbaaro utaalay ayaa lagu yiri qaad jid-gooyadan wuxuu yiri maxaa dhacay? Shacabka ayey dhibaato ku haysaa ayaa la yiri? Aniga shacabka ma dhibaateyo ee canshuur yar ayaan dadka ka qaata, ee sabab macquul ah ii sheega ayuu yiri. Ceeb siyaasadeed ayey ku tahay Muqdisho ayaa loogu jawaabay. Isbaaradda Badda iyo tan Cirka miyaa Caasimadda ceeb ku ah? Mise Isbaaraddan aysan beesha caalamku arkaynin ayaa magaalada ceeb ku ah? Ayuu yiri. Wuxuuna uraaciyey. Hadaad dhabta rabtaan, haddii lasoo wada xiro dekedaha ay ganacsatadu samaysteen iyo garoon-nada ay Wasiiradu leeyihiin tan jidadka weyba iska xirmaysaa, oo anagu halkaas ayaan shaqo u doonanaynaa.
SomaliTalk.com | Nairobi, Kenya | July 25, 2005
DAREENKA KHUDBADDA MADAXWEYNAHA